8 Muuqaal Muuqaal Ah Oo Muujinaya Anime Waxaad U Baahan Tahay Inaad Daawato - Kale
8 Muuqaal Muuqaal Ah Oo Muujinaya Anime Waxaad U Baahan Tahay Inaad Daawato
Bandhigyada Anime ee lagu xusay boostadan:
Hugurashi: Markay Ooyaan.
Elfen Been sheegay.
Buufiska Birta Buuxa.
Waxaa jira in kabadan 20,000 + bandhigyo Anime adduunka ah, sida ku cad websaydhka - Liiska MyAnime
Qaar badan oo ka mid ah Anime-yadaas waa kuwo qosol badan, qosol badan, oo ay ka buuxaan ficil iyo jacayl.
Laakiin liiska maanta, waxaan diiradda saari doonnaa 8 muujinaysa feker-kicinta Anime waxaad u baahan tahay inaad daawato
Bandhig kasta ayaa ku yeelan doona si qoto dheer uga fakaraya nolosha, wuxuuna beddeli doonaa sida aad adduunka u aragto.
Code Geass wuxuu ku saabsan yahay dagaal u dhexeeya Japan iyo Boqortooyada Ingiriiska ee Quduuska ah.
Oo waxay bilaabmaysaa markay Britannia ku soo duusho Japan, oo ay la wareegto dalkooda, oo ay u magacawdo Japan aagga 11.
Code Geass waa nooca Anime ee aadan ka caawin karin inuu ku cajab galiyo.
Dabeecadda ugu weyn, Lelouch Vi Britannia, waa mid caqli badan, caqli badan, istiraatiiji ah, xariif ah, oo dhalaalaya in yar.
Oo taxanahu markay bilaabaan inay horumariyaan dhacdooyinka dhacaya ayaa maskaxdaada qarxin doona, daankaaguna dhulka ayuu dhigi doonaa, oo xitaa wuu kaa xanaaqi doonaa.
Waxaad ku horumarin kartaa xiriir jacayl-naceyb oo loogu talagalay astaamaha ugu waaweyn ujeeddooyinka iyo habka uu adeegsado si uu u gaaro himilooyinkiisa.
Laakiin taasi waa waxa ka dhigaya Code Geass taxane wanaagsan.
Khuseeya: 5 Ka Mid ah Casharada Nolosha Ugu Weyn Code Geass ayaa ku bari kara
2. Higurashi: Markay Ooyaan
jeex top nolosha jacaylka anime
Anime wuxuu ka bilaabmayaa aag loo yaqaan - Hinamizawa. Magaalo uu habaaray ilaah tuulada - Oyashiro.
Dabeecadda ugu weyn: Keiichi Maebara ayaa dhawaan u guurtay Hinamizawa maaddaama Anime uu bilaabmayo.
Sannad kasta markay xafladdu timaaddo, qof ayaa la dilaa iyo qof kale oo si yaab leh u baaba'aa hawo khafiif ah. Laakiin waxa dhexdooda ka dhacayaa ma aha wax ka yar tijaabada nafsaaniga ah.
Ii aamin waa waalan
Haddii aad raadineyso wax qarsoodi ah, mugdi iyo maskax kacsan, Higurashi waa show-ga Anime ee loogu talagalay.
Waxay kugu yeelan doontaa inaad ka fikirto - 'sidee F u dhacday taasi' kolba qayb kastaa ay sii socoto.
Lama saadaalin karo Higurashi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan inta aan ka arko.
3. Ergo Wakiil
Ergo wakiil si fudud ayaa ah mid ka mid ah kuwa layaabka leh, inta badan fekerka kiciya Anime ee aan daawaday.
Sheekadu waxay ka bilaabmaysaa magaalo la yiraahdo Romdo .
Magaalo ay ka dhacday masiibo kumanaan sano ka hor halis galisay meeraha.
Aad ugama sii dhex geli doono, waxaan kugula talin lahaa inaad daawato trailer-ka hoose. Ka dib gal Anime-ka haddii ay ku habboon tahay dhadhankaaga.
4. Elfen Been sheegay
Elfen Been wuxuu ku saabsan yahay Lucy , Tijaabo dawladeed oo dhacda si looga baxsado sheybaaradeeda.
Anime-kan ayaa kaa fikiri doona dhinaca nolosha ee naxariis darada ah, sida cadaalad darada ah ee xaaladaha qaar ay yihiin, iyo sida xumaanta iyo shar wadayaasha aadanaha u noqon karaan.
Waan kaaga digayaa. Waa mid aad u rabshad badan, ka rabshad badan celceliska Anime ee loo arko 'rabshad'.
Tani waxay noqoneysaa mid naxariis daro ah kadib markay arkeen muuqaalo dhiig badan iyo niyad jab badan.
Laakiin haddii aad taas ka gudbi karto, tani waa Anime abaalmarin ah oo la daawado. Waxayna ku xidhan tahay inaad su'aalo ka weydiiso noloshaada, iyo bulshada lafteeda.
5. Buufiska Birta Buuxda
Buufiska Birta Buuxa waa anime ku saabsan nolosha Edward Elric Iyo Alphonse Elric.
Laba walaalo ah oo markay hooyadood waayeen, isku dayay inay dib ugu soo celiyaan nolosha iyadoo leh awoodda Alchemy.
Qalabka loo baahan yahay in lagu sameeyo waa Falsafadayaasha Dhagaxa.
Waa inaan ka idhaahdaa dhammaan anime-yada ku jira liistadan, Full Metal Alchemist waa # 1 sida loo sameeyo fikir kicinaya waa.
Kaliya maahan inaad ka fikirto xigashooyin macno leh , laakiin waxaad ka arki doontaa nolosha aragti aanad waligaa tixgelin siin.
Waxaadna bilaabi kartaa adeegsiga mabaadi'da noloshaada. Mabda 'ay ugu yeeraan - Sharciga Is-weydaarsiga u dhigma.
Violet Evergarden waxaa loogu magac daray kan ugu weyn dabeecadda show this. Waxaa soo saaray Animation Kyoto.
Sheekadu waxay daba socotaa Violet, iyo safarkeeda ogaanshaha maxay ka dhigan tahay in 'qof la jeclaado'.
Ka dib oo dhan - abaanduulkeedii guud ee ciidammadii ereyadiisii ​​ugu dambeeyay ee ay u dirayaan Violet wuxuu ahaa 'waan ku jeclahay', laakiin waxay ahayd mid aan aqoon badan lahayn si ay u fahamto markii ay dhacday.
Weligay ma arag anime awood u leh inuu qurux yeesho, cajiib ah, shucuur leh iyo feker-kicinta hal mar.
Runtii waxay kaa dhigeysaa inaad ka fikirto: waa maxay jacayl? Sideed run ahaantii u qeexaysaa?
Sideedse uga gudubtaa musiibada ku haysa qof aad jeceshahay, ama kaaga dara: qaadashada nolosha qof sida askari ku jira dagaal dhan?
Waxyaabaha noocaas ah waxay ku xidhan yihiin inay kugula noolaadaan nolosha, wayna cadahay in Violet ay kujirto taariikhdeeda mugdiga ah ee ay jirtay qasbay ku noolaanshaha hadday jeceshahay iyo haddii kaleba.
Akhriso: 5 Casharrada Nolosha Caadifadda ah Violet Evergarden ayaa ku bari doonta
Jormungand waxay ku saabsan tahay ganacsade hubka ka ganacsada iyo ilaaladeeda oo adduunka u socdaala.
Ganacsatada hubka dabeecad ahaan waxay maalgeliyaan dagaallada, waxay qoryaha ka iibiyaan dagaal oogayaasha, siyaasiyiinta hooska leh iyo qof kasta oo ka shaqeeya dhulka hoostiisa.
Anime-kani waa mugdi, niyad jab, laakiin xiiso leh oo ka buuxo tacabur. Xaqiiqdiina waa mid macquul ah waa waxa sameeya Jormungand sidaa u fikir iyo maskax furnaan.
Waa bedel wanaagsan oo Black Lagoon ah , laakiin Jormungand gabi ahaanba way ka duwan tahay sida ay isu iibiso iyo nooca fariinta ee ay gudbiso.
Waxaad waali laheyd inaadan isku dayin.
Monster waa taxane taariikhi ah Marnaba ma ilaawi doono, waxaa soo saaray Madhouse.
Waxay ku saabsan tahay dhakhtar la yiraahdo Kenzo Tenma. Iyo safarkiisa ogaanshaha in nolosha cunugga uu badbaadiyay… runti waa dilaa taxane ah goor dambe.
Bal ka fikir taasi - waxaad tahay dhakhtar qalliin waxaadna badbaadinaysaa nolosha carruurta adoo si nabadgelyo leh qori uga soo saaraya madaxooda. Kaliya si loo ogaado isla cunugga, 10 sano ama wixii ka dambeeya waa dilaa taxane ah.
Taasi waa qoto dheer.
Taasina waa sababta saxda ah ee uu 'Monster' sidaas u yahay fikir kicinaya kuna awood badan qaabka ay uga sheekaynayso sheekadeeda murugsan.
Waa bedel wanaagsan oo muujinaya bandhigyada sida Higurashi, Psycho Pass, Parasyte ama Gunslinger Girl.
Dugsi Toos ah
Akame Ga Dila.
Miyaad mar dambe ka fikirtay anime kicinaya inaad ku darto liiskan?
Warqad Furan oo ku socota Warshadaha Anime ee ku saabsan PIRACY
Waa maxay sababta nacaybka loogu qabo Emilia Re: Zero waa la buunbuuniyey
ugu sareeya 20 animes waqtiga oo dhan